Tele RELAY တစ်ခု - တစ်ဦးကယာဉ်မောင်း FAO မှကင်မရွန်းအလုပ်အကိုင်
မူလစာမျက်နှာ » ကင်မရွန်း - ဂျော့ဘ် • ယောဘသည်အခွင့်အလမ်းများ ကင်မရွန်း FAO မှ TO သို့ Driver များအတွက် "အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကို
ကင်မရွန်း FAO မှ TO သို့ Driver များအတွက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကို
Alexandre EKOBE 22 မေလ 2019
X အီးမေးလ်ပို့ရန်2 Reddit1 Stumbleupon0
ယောဘသည် POST: 22 / မေလတွင် / 2019
ပိတ်သိမ်းနေ့စွဲ: 05/Jun/2019, 9:59:00 PM
အဖွဲ့အစည်းယူနစ်: ကင်မရွန်း FAO မှ
လိုအပ်ချက်အမျိုးအစား: NPP (အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ထမ်းရေးရာ)
တန်းအဆင့်: N / A
ရှည်ကြာခြင်း: 11 လအတွင်း
post ကိုနံပါတ်: N / A
အရေးကြီးအသိပေးစာ: ဒါကပိတ်နေ့စွဲနှင့်အချိန်ကိုအခြေခံပြီးသိသိသာသာတန်ဖိုးများကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး device ကိုနေ့စွဲနှင့်အချိန် setting များကိုဖြစ်ပါသည်ပြသမှတ်ချက် ကျေးဇူးပြု.
FAO ၏အကောင်းဆုံးအားလုံးဒေသများတွင် FAO မှအဖွဲ့ဝင်များအစေခံနိုင်ရန်အတွက်လိင်, ပထဝီနှင့်ဘာသာစကားမတူကွဲပြားမှုရှာတတ်၏။
အားလုံး applications များဒါပေမယ့်အဲ့ဒီ့လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အတူကုသပါလိမ့်မည်။
ကင်မရွန်းနှင့်မိတ်ဖက် FAO ၏များ၏ဆက်ဆံရေးရုံးများရုံး, အစားအစာ, အာဟာရ, စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များအတွက်ဦးစားပေးရည်မှန်းချက်အပေါ်သို့သဘောတူညီမှီဖို့မဟာဗျူဟာများကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်ကွပ်မျက်, မြှင့်တင်ရေး, သွားမယ်လို့၏ထောက်ခံမှု၌တည်ရှိ၏။
အဆိုပါ FAO ၏ကိုယ်စားလှယ်၏ယေဘုယျကြီးကြပ်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး၏အလုပ်လုပ်တဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိလက်ရှိအကျင့်ကိုကျင့်
သူသို့မဟုတ် FAO ၏ကိုယ်စားပြုမှု၏ယာဉ်မောင်း၏ function ကိုမှာလက်ရှိစီမံကိန်းကိုမန်နေဂျာနှင့်အတူအစိုးရအနေဖြင့် (မွငျ့မား) အရာရှိများနှင့်အခြားကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများနှင့်အတူအမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာဧည့်သည်များနှင့်အတူတိုင်းပြည်ရုံးအားလုံးအဆင့်ဆင့်ကနေန်ထမ်းများနှင့်အတူပုံမှန်ထိတွေ့မှု၌တည်ရှိ၏, အဖွဲ့အတွင်းမှာပဲနှင့်ပြင်ပမှအတိုင်ပင်ခံနှင့်အခြားဝန်ထမ်း။ သူ / သူမမကြာခဏရုံးပြင်ပကနေလူများအတွက်အဆက်အသွယ်၏ပထမဦးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ / သူမ interactive ဒေသခံရုံးများနှင့်ပံ့ပိုးပေးဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်ဝန်ထမ်းများနှင့်အရာရှိကြီးများနှင့်အတူနေ့ကအခြေခံမှတစ်နေ့လျှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တာဝန်ရှိသူတဦးကခရီးစဉ်အပေါ်နိုင်ငံရုံးမှဝန်ထမ်းများနှင့်သူတို့၏အရာရှိတဦးကဧည့်သည်များမောင်းနှင့် FAO ၏ကိုယ်စားလှယ်နှင့်သူ / သူမ၏ဧည့်သည်များအတွက်မောင်းထုတ်
တွေ့ဆုံဝန်ထမ်းများနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကဧည့်သည်များလေဆိပ်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်, ထုံးစံ formal, ဟိုတယ် check-in များနှင့်အခြားဒေသခံ formal
တာဝန်ရှိသူတဦးကခရီးစဉ်များနေ့စဉ်မိုင်အသက်အရွယ်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး / မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးစရိတ်များ, ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုများ, ပြုပြင်, etc Log
အဆိုပါတာဝန်ပေးအပ်မော်တော်ယာဉ်၏နေ့ဝန်ဆောင်မှုနေ့ကသေချာ; စစ်ဆေးမှုများရေနံ, ရေ, ဘက်ထရီ, တာယာ, အသေးစားပြင်ဆင်မှုများလုပ်ဆောင်အပေါင်းတို့နှင့်အချိန်များတွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောနှင့်နည်းပညာပိုင်းအသံကိုယာဉ်စောင့်ရှောက်ဖို့အချိန်မဆိုအခြားလိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုများစီစဉ်; စင်ကြယ်သောအခွအေနအတွက်မော်တော်ယာဉ်ထိန်းသိမ်းပါ
ဘယ်အချိန်မှာမတော်တဆမှုအတွက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတရားဝင်ကိုင်တွယ်; ဤအမှု၌, ရှိသမျှ / ပြည်တွင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနိုင်ငံ Office ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, စည်းမျဉ်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမှန်ကန်စွာကျနေကြသည်ဒါကအာမခံပါသည်။
စုဆောင်းနှင့်တိုင်းပြည်ရုံးကနေများနှင့်မေးလ်, စာရွက်စာတမ်းများ, Pouch နှင့်အခြားဆက်သွယ်ရေး / ပစ္စည်းများကယ်နှုတ်တော်မူ; ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးယူကယ်နှုတ်ခြင်းငှါ, စာတိုက်, လေဆိပ်, အစိုးရအေဂျင်စီများ, အဖွဲ့အစည်းများ, စီမံကိန်းကိုက်ဘ်ဆိုက်များ, စတာတွေကိုသွား; လိုအပ်သောအဖြစ်မှတ်တမ်းများထားပါ။
လိုအပ်တဲ့အခါ, ထိုသို့သောဖုန်းကိုအောင်နှင့်ဖြေဆိုအဖြစ်ရိုးရှင်းတဲ့ဓမ္မဆရာတာဝန်များထမ်းဆောင်အတွက်တိုင်းပြည်ရုံးဝန်ထမ်းကူညီရန်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်, မိတ္တူအောင်, ရိုးရှင်းတဲ့တောင်းဆိုထားသည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကအောက်ပါ Assessment ဆန့်ကျင် BE မညျ
ပညာရေး; ခိုင်လုံသောယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၏အလယ်တန်းပညာရေး, ပိုငျဆိုငျ
ဘာသာစကားများ; English သို့မဟုတ်ပြင်သစ်၏အလုပ်လုပ်ကိုင်အသိပညာ
core အရည်အချင်း FAO မှ
နည်းပညာဆိုင်ရာ / Functional ကျွမ်းကျင်မှု
ဒေသခံအခြေအနေများ၏ထုံးစံ, ခေါင်းဆောင်မှုဥာဏ်ကောင်းသောနှင့်အသိပညာကားမောင်း Save
အားလုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသငျ့သညျမှလိုက်နာဒါကမှတ်ချက် ကျေးဇူးပြု. FAO မှ, အားလုံးနှင့်သမာဓိနှင့်င့်လင်းမြင်သာမှုအတွက်လေးစားရန်ကတိသစ္စာ၏ FAO ၏တန်ဖိုးများ။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအွန်လိုင်းပရိုဖိုင်းကိုမှစေ့ဆော်တဲ့စာကို attach လုပ်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံနေကြပါတယ်။
application များနေ့စွဲတွေအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင် 23 ဥရောပအလယ်ပိုင်းအချိန် (CET): နေရာလွတ် 59 မှာစုဆောင်းမှုပေါ်တယ်မှဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးနေ့နေ့စွဲမတိုင်မီအကောင်အထည်ဖော်ကောင်းစွာတင်ပြရန်လျှောက်ထားတိုက်တွန်းပါသည်။
သငျသညျအကူအညီနဲ့, ရွှေ-ရှိမေးမြန်းချက်လိုအပ်ပါက, ကိုဆက်သွယ်ပါကျေးဇူးပြုပြီး: Careers@fao.org
FAO မှတစ်ဦးကဆေးလိပ်မသောက်ပတ်ဝန်းကျင် IS